KissClassic Condoms - (ရိုးရိုးကွန်ဒုံး) x6 | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Kiss Classic Condoms - (ရိုးရိုးကွန်ဒုံး) x6
ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-5ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။
U Zay Yar
Kiss Classic Condoms x20 နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2017 ဇှနျ 8
2017 မေ 11
Good နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Aung Htun Thant
2017 ဧပွီ 24
the best quality and the best services နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Classic Condoms x20
it's really safe to use and nice taste. I recommend all of you use if you need anything to avoid, reasonable price and good quality as well as good taste. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အရည်အသွေးနဲ့ ကာကွယ်မှုကို ပေးနိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံး ပန်းရောင် ကွန်ဒုံးကို ကောင်းမွန်လုံခြုံတဲ့ အသားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ချောမွေ့အောင် စီမံထားမှုက စိတ်ကျေနပ် သာယာမှုကို ရရှိစေမှာပါ။Kiss Classic ကွန်ဒုံး ဘူး ၆ ကို ၁၅၀၀ ကျပ်တည်းနဲ့ Shop.com.mm မှာ ရောင်းချပေးနေပါပြီ။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Classic Condoms - (ရိုးရိုးကွန်ဒုံး) x6